Misy Mampianatra Any Ambanivohitr’i Kolombià Mitondra Eo Ambonina Ampondra Roa Mivezivezy Manome Tranomboky Mandehandeha Ho an’ny Ankizy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Septambra 2016 3:26 GMT
Vakio amin'ny teny English, Swahili, 日本語, srpski, čeština , bahasa Indonesia, русский, Deutsch, عربي, Ελληνικά, Italiano, Español
Biblioburros, tranomboky mandehandeha ao Kolombià. Sary: Acción Visual / Diana Arias / Wikipedia (CC BY-SA 3.0).
Mba toy ny ahoana ary izao tontolo izao raha tsy nisy ny saina sy ny fitiavana mamorona an'ireo mahita ny zava-manjo ary mikaroka izay azony atao mba hanatsaràna izany? Mba toy ny ahoana izao tontolo izao raha tsy nisy mpampianatra?
Mahatakatra ny lanjan'ny fampianarana i Luis Soriano, mpampianatra ao aminà sekoly ambaratonga voalohany teraka tao Nueva Granada. Notezaina tao amina fiarahamonina iray tao amin'ny kaominin'i La Gloria izy, tao amin'ny departemantan'i Cesar. Nahazo diplaoma tamin'ny literatiora Espaniola i Soriano, noho ilay mpanabe nitsidika ny tanànany indroa isam-bolana.
Nahatsikaritra manokana ny lanjan'ny fanabeazana, manao izao vitany i Soriano mba hahazoany antoka fa tonga tsara any amin'ireo ankizy ny boky izay tsy ho azony raha tsy izany. Tranomboky mandehandeha ny ”Biblioburros” (ara-bakiteny dia ”Tranomboky Ampondra”) izay mizara boky manerana ny Avaratr'i Kolombia eo ambony lamosin'ireo ampondra roa antsoina hoe Alfa sy Beto, anarana raha atambatra dia manome ny teny alfabeto amin'ny teny espaniola, na ”abidia”. Ary zavatra hafa fanampiny: ‘ Izy ireo no ampondra hendry indrindra erak'izao tontolo izao,” araka ny bilaogin'ny Fanaovana Gazety Fitantarana ao Amerika Latina:
Tamin'ny 1997, nanana hevitra noheverin'ny maro ho tena mahafinaritra [i Soriano], fa tamin'ny hafa dia hadalàna fotsiny ihany izany: nanapaka hevitra ny hameno ny lamosin'ireo ampondra roa aminà boky matematika, literatiora, jeografia, ary ny boky tantara miisa 70 izy. Ny tanjony? Hitondra azy ireo ho amin'ny ankizy mahantra maro mipetraka amin'ny faritra lavitra ao amin'ny vohitrany.
Nankafy vaky boky hatramin'ny fahazazany i Luis Soriano — fitiavana lazainy fa azony tamin'ny nenitoany, izay niaraka taminy no nahitany ilay tononkalo tsy hay adinoana avy tamin'ilay Nikaragoaiana poeta, Rubén Darío:
Tsy misy isalasalàna ny amin'izany, Kolombiana iray adala mpanenjika nofinofy fotsiny – Don Quichotte - i Soriano, toy ilay Mpitaingin-tsoavalin'ny Tarehy Malahelo, miaraka amin'ireo boky. Raha novakian'ny nenitoany tamin'ny ny ”Malahelo tahaky ny inona ny ranomasina ry Margarita,” tsy nahita tory nandritra ny valo andro izy. Efa taona izy tamin'izany ary raha mbola afaka nanakatra lavitra azy io izy tamin'izany dia, fara fahakeliny, efa nahatsinjo fa hifamatotra amin'ny literatiora ny fiainany.
Vao haingana i Soriano no niteny tao amin'ny CCN.com i Soriano , nitanisa ny sasany amin'ireo antony nanosika azy hanao ilay tetikasany tranomboky mandehandeha. Araka ilay tranonkala:
Ao amin'ny faritra [ambanivohitra], mila mandeha tongotra na mitaingina ampondra mandritra ny 40 minitra eo ny zaza iray raha te-hahatratra ny fianarana akaiky indrindra. […] Kely ny fahafahan'ireo ankizy mandeha amin'ny sekoly ambaratonga faharoa. […] [Vitsy] ireo mpampianatra maniry ny hampianatra any ambanivohitra.
Ny faniriany mba hanaparitaka ny vaky boky dia tsy mijanona amin'ny teny Espaniola ihany : mizara ireo bokiny vitsivitsy amin'ny teny Anglisy ihany koa amin'ireo tanora mpamaky i Soriano:
Raha mandeha miady manohitra ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra ao anatin'ny firenena iray reraky ny ady fahiny, maniry ny hanitatra ny tahirim- bokiny kely amin'ny tenim-pirenena Anglisy i Soriano. Amin'y fahatakarana ny maha-zava-dehibe ny fahaizana teny roa ao amin'ny firenena izay tsy mitsahatra ny mifandray amin'ny tontolo ivelany amin'ny alalan'ny niomerika sy pirinty, nahatsapa amim-pirehetam-po fatratra izy fa tokony hanana fahafahana kokoa amin'ireo teny voasoratra amin'ilay fiteny be mpampiasa indrindra eran-tany ireo ankizy any ambanivohitra.
Mampiseho an'i Luis Soriano amperin'asa ny lahatsary eto ambany, manasongadina ireo fahasarotan'ny fahazoana boky any amin'ny faritra sasany. Izany, mazava ho azy, dia ny toerana hatongavan'izy sy ireo ampondrany.
Manana boky 3.480 aho voatahiry ao anaty baoritra, mivanogongo ao anaty talantàlana, ao anaty baoritra, ary ao anaty baoritra kely. Mametraka azy ireny any amin'ny toeran'ny namako ihany koa aho, raha tsy izany dia tsy hisy toerana ho ahy, na ho an'ireo boky. […] Alfa ihany raha ny marina no iray mpitondra ny boky rehetra, manana lohateny miisa 120 izahay ao amin'ireo talantalam-boky ho ankafizin'ny ankizy any amin'ny faritra ambanivohitra ireo. Manao fitsidihana mandritra ny 3,4,5, na 11 ora mihitsy aza izahay. Izay 8 ora mitaingina ampondra.
Izany no fanoloran-tena mandritra ny androm-piainana—mahatsapa tena ho ilain'ny fiarahamonina misy ahy.
Ao anatina lahatsoratra iray niseho tamin'ny tranonkalam-baovao Quartz, voarakitra ho iray amin'ireo tranomboky valo tokony tsidihan'ireo mpankafy vaky boky ny Biblioburros. Niteraka hafanampo tao amin'ireo mpampiasa Twitter miteny Anglisy, ihany koa.
#biblioburros eny. https://t.co/SiSXU3o1AK
Avy amin'ny Biblioburros ka hatrany amin'ny Walmart … alaivo ny sarina tranomboky hafa kelinao: https://t.co/zoLkBenhF3
Ny biblioburros no heveriko fa tiako indrindra.
Ho vokatry ny ezaka nataony, nataon'i Jeanette Winter fahatsiarovana tsy ho faty mandrakizay ao anaty boky ho an'ny ankizy mihitsy aza i Luis Soriano!
Mankalazà ny #FetyNasionalin'nyTranomboky miaraka amin'ny ”Biblioburro” an'i Jeanette Winter pic.twitter.com/Rt7zHo6mYL
Indray andro, nanapaka hevitra i Luis ny hampibaby ireo ampondra roa, Afla sy Beto, amin'ny boky ary nitondra azy ireo mba ho any amin'ny faritra lavitra ho an'ireo ankizy tsy afaka mahazo azy ireo raha tsy izany. Nanomboka teo, mamakivaky ny firenena izy miaraka amin'ny tranombokiny mandehandeha.